Heshiis laga gaadhay gobollada Jubbooyinka - BBC Somali - Warar
Heshiis laga gaadhay gobollada Jubbooyinka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Agoosto, 2013, 18:54 GMT 21:54 SGA
Dowladda Federalka ee Soomaaliya iyo maamulkii gobollada Jubbooyinka ee uu hogaaminayay Sh Axmed Islaam Madowbay ayaa ku saxiixay magaaladda Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya heshiis lagu abuurayo maamul loo bixiyay maamulka ku-meel-gaarka ee Jubba.
Hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ayaa waxaa uu madax u noqonayaa maamulka saddexda gobol ee kala ah Jubbadda Hoose, Jubbadda Dhexe iyo Gedo, labada sano ee soo socota. Waxuuna hoggaamiyahaasi magacaabaya godoomiyeyaasha goboladaasi.
Waxaa sidoo kale meliishiyoonka hubaysnaa ee gobolladaasi lagu darayaa ciimadda qalabka sida ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana la qaban doonaa laba shir oo lagu kala qabanayo magaalooyinka Muqdishu iyo Kismaayo si lagu dhameystirayo maamulka, lagana qeyb galiyo qeybaha kale ee bulshada.
Maamulida dekadda Kismaayo iyo garoomadda Diyaaradaha ayaa muddo lixbilaad ah ka dib waxaa lagu wareejinayaa dowladda Federaalka Somaaliya, si ay dhakhilga loogu sameeyo nidaam isla markaasina looga wada faa'iideysaan dhamaan.
Ukraine oo codsatay in ay NATO ku biirto